I-Mari Evans - Igumbi elinokuthula eduze nedolobha. - I-Airbnb
I-Mari Evans - Igumbi elinokuthula eduze nedolobha.
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Stephen
Leli kamelo lingaphesheya kwehholo ukusuka egumbini lokugezela. Inekhabethe lezingubo zokugqoka, usofa kanye nombhede womatilasi we-Helix ohlelweni lwenkundla. Kulula futhi kuthokomele. Izivakashi kufanele zazi ukuthi nginekati elinamahloni elibizwa ngo-Alice. Uthandeka kakhulu. Nginelinye ikamelo elifakwe ku-Airbnb ngakho izivakashi zingase zibe nethuba lokuhlangana nabanye abantu abavela ezweni noma emhlabeni jikelele! :)
Isitayela sami singesona esincane. Ngizama ukuyigcina ilula futhi inesitayela. Ngiye ngahlala ekhaya lami isikhathi esingaphezu konyaka. Kunamabala kukhaphethi avela kubanikazi bangaphambilini. Ngiye ngahlanza ikhaphethi ngesitimu ukuze ngisuse amanye amabala futhi ngisebenzisa i-vacuum njalo. Ithemba lami nephupho lami ukushintsha ukhaphethi maduzane ukuze ngiwunikeze ukubukeka okusha!
Ikhaya lami liseduze nedolobha, i-IUPUI, izibhedlela kanye ne-Indianapolis Motor Speedway! Kulula kakhulu ukuhambahamba usebenzisa i-Uber noma i-Lyft. Ngihlala endaweni yokuhlala yabanikazi bezindlu base-Afrika baseMelika nase-Latino. Abafundi abengeziwe be-IUPUI baqasha amakhaya aseduze. Ngiyabathanda omakhelwane bami njengoba bonke banobungane futhi basiza. Iningi lezenzo nokuphila kwasebusuku kwenzeka edolobheni eliseduze. Izivakashi zingase zifune njalo ukuhlola i-Mass Ave, i-Fountain Square ne-Broad Ripple uma zifuna izinto ezingazenza e-Indianapolis. Kunomtapo wolwazi womphakathi oqhele ngebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka ekhaya lami. Kukhona nesitolo esidume umhlaba wonke se-donut endaweni ezungeze idolobha elikhulu! Qiniseka ukuthi uhlola i-Long 's Donuts ukuze uthole isidlo sasekuseni!
Ngisesikoleni futhi ngisebenza isikhathi esigcwele ngakho ngihlala ngimatasa kakhulu, kodwa ngiyatholakala ukuphendula imibuzo yezivakashi zami. Ngike ngathola nesikhathi sokuhamba nezivakashi zami ezimbalwa okuhlale kujabulisa kakhulu! Noma kunjalo, ngiyaqaphela ukuthi ezinye izivakashi zincamela ubumfihlo, zidinga ukwenza umsebenzi othile noma zidinga ukuphumula futhi ngiyakuhlonipha lokho futhi ngeke ngikukhathaze.
Ngisesikoleni futhi ngisebenza isikhathi esigcwele ngakho ngihlala ngimatasa kakhulu, kodwa ngiyatholakala ukuphendula imibuzo yezivakashi zami. Ngike ngathola nesikhathi sokuhamba…